Proclaiming the Word - Manatratra ireo ankizy amin’izao andro fivoarana izao | Outlines of Messages
Manatratra ireo ankizy amin’izao andro fivoarana izao
(1 Tantara 12, 32)
1. Inona no mahasamihafa ny vanim-ptoana iainan’ny ankizy amin’izao fotoana izao ?
Ny ankizy amin’izao fotoana izao dia manaiky fa “ny fomba fijery tsirairay avy dia misy antony avokoa”. Raha jerena dia tena marina izany. Isika dia matetika mijery araka ny fijerintsika. Fa ny ankizy ankehitriny kosa dia tsy tena mahatoky manoloana ny fandinihana tsara ny fandorosoana, ary tena mitady fahalalàna sy fahazoana antoka.
2. indreto misy fomba fisainana telo:
2.3 Aorian’ny modernisma
3. Mitory ny Filazantsara amin’ireo taranaka taorian’ny moderisma
Mila manitatra izay efa haintsika mikasika ny Fitoriana ny Filazantsara isika.
Ny ankizy ankehitrio dia tsy dia mandray loatra ny fomba fitoriana nentin-drazana. Zareo dia efa manana fanontaniana miankina amin’ny fandrosoana eo amin’ny fiainana ary ny zava-misy andavanandro. Nefa rehefa miresaka ny fandrosoana aminy isika dia tsy maintsy miresaka an’I Kristy. Ny tanjon’ny asa fanompoana rehetra dia ny hanampy ny olona hiala amin’ny fiainana tsy mamely mankany amin’ny fitiavana an’Andriamanitra. (Deot 6, 5).
Mila mankasitraka ny zavatra iraisana amin’ireo taranaka ankehitriny isika.
Mila mahazo sy mahatakatra ny zavatra iraisantsika sy azontsika ifampizarana amin’ny taranaka amin’izao fotoana izao isika. Misy finoana sy soatoavina ary kolotsaina maro be iza y mifandray kely na manontolo amin’ny tantara kristiana amin’izao fotoana izao. Izany dia mamorona sehatra iraisana hahafahantsika manorina fifandraisana. Ohatra:
Ny kolotsiana tandrefana dia tsy mampandroso.
Amin’ny maha Kristiana miorina amin’ny Baiboly antsika, dia tsy mino fa ny fiaraha-monin’olombelona dia tsy mitondra antsika any amin’ny tontolo tanteraka. Ny Evanjelika dia afaka mafanaiky amin’ny taranaka ankehitrio amin’io hevitra io. Afaka manontany olona isika raha ny teknolojia dia tsy hitondra antsika amin’ny nofinofy tsy azo tanterahana, amin’izay tiantsika handehanana ? Ny modernisma dia azo antenaina fa ny Postmodernisma dia tsia.
Mikasika ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fahaizana miaina sy ny fahitsiana.
Ny taranaka taorian’ny modernisma dia variana amin’ny olan’ny volon-koditra sy ny mahalahy na vavy.. Isika koa dia mila ny mijery ireo zavatra ireo, nefa inona no endrika sy fepetran’ny fahitsiana sy ny fitovizan’ny lahy sy ny vavy ?
Fieritreretana ny fitehirizana ny zavaboahary.
Ny taranaka taorian’ny modernisma mitarika ny hetsika fanafoanana ny fahalotoana (pollution). Tokony mahatsapa ny fitandrovana mafy ny tontolo iainan ny kristiana. Afka miara-mizara amin’izay ireo ny faniriana lalina hananana tontolo madio sy tsara indrindra isika.
Manindry ny famoronana artistika.
Afaka mahita isika fa eo amin’ny Mars Hill, ny Apostoly Paoly dia nanonona ny kolotsain’ny mpanao poety toy izay avy tamin’ireo mpaminany teo an-toerana (Asa 17). Ny kristiana dia mila mampiasa ny fahaizana mamorona amin’ny fahitana ny feo avy amin’ny kolotsaina izay afaka mampiseho ny endrik’Andriamanitra, na dia tsy fantany aza izany.
Ny fifandraisana izay tena zava-dehibe.
Ny taranaka taorian’ny modernisma dia nanindry sy nanisy dikany lehibe ny fiarahamonina tamin’ny fomba rehetra. Miaraka amin’ny finoantsika ny Telo iIzay Iray, dia afaka mahita ny fifandraisana ao anivon’ny fiaraha-monin’olombelona koa isika.